Soomaaliya oo maanta u gudbineysa Maxkamadda ICJ dacwad Badda ee ka dhanka ah Kenya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Soomaaliya oo maanta u gudbineysa Maxkamadda ICJ dacwad Badda ee ka dhanka ah Kenya
MAREEG 13 July 2015
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ugu gudbin doontaa Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ku taala magaalada The Hague dacwada ka dhanka ah Kenya ee ku aadan muranka Badda ee labada dal u dhaxeeya.
Wafdi uu hogaaminayo Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Dr. Axmed Cali Dahir oo gaaray magaalada Hague ayaa sheegay in maanta oo ah 13-ka July ay Maxkamadda ICJ u gudbinayaan dacwadooda ku aadan arrinta muranka Badda, isagoo ku eedeeyay dowladda Kenya inay ku xoo xadgudubtay Badda Soomaaliya.
Dr. Axmed Cali Dahir oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa rajo ka muujiyay in dacwadan ay guuleysan doono, isagoo xusay in dacwadan muddo labo sano ah laga soo shaqeynayay.
“Dacwadan muddo labo sano ah ayaa laga soo shaqeynayay, waxaan jeclaan lahaa in ummadda Soomaaliyeed inay dowladda ku kalsoonaadaan iyo dadka u matalaya dacwadda, waxaan ummadda ugu bishaareynayaa in dacwaddu ay tahay mid ay ku helayaan xaqooda, waxaana heysanaa kalsooni weyn oo ah in kiiskan uu yahay mid aan ku guuleysanayno” ayuu yiri Xeer Ilaaliyaha.
Kenyan jets bombardment in Somalia killed over 10 civilians